ओलीसँगी ठाकुर चिढिएपछि...
काठमाडाैं, ४ चैत । सरकार जाने बाटो बन्द भएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग चिढिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेसँगै राजपा सरकारमा जाने बाटो बन्द भएको छ।
काठमाडाैं, ४ चैत । नेपाली कांग्रेसमा पदाधिकारी संख्या बढाउने विषयलाई लिएर सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबचि विवाद सुरु भएको छ । पार्टीको महाधिवेशन भएको दुई बर्ष वित्दासमेत पदाधिकारीसहित केन्द्रीय समितिले पुर्णता पाउन
काठमाडाैं, ४ चैत । ओलीले शुक्रबार सरकार विस्तार गर्दा भने संघीय समाजवादी फोरमलाई मात्रै सहभागी गराउने गरी दुई मन्त्रालय खाली राखेका छन् । प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार ११ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री थपेपछि मन्त्रिपरिषद् २२ सदस्यीय भएको छ ।
काठमाडाैं, ४ चैत । प्रतिनिधिसभाकी सांसद पार्वती बिशुन्के देशभरकै सबै सांसदभन्दा कम उमेरकी सांसद भएकी छन् । नेकपा एमालेका तर्फबाट समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेकी बिशुन्केको नागरिकतामा जन्ममिति २०४३ साल असोज १८ गते रहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार, ११ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री थपिए
काठमाडौं, २ चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक महिनामा शुक्रबार तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका छन्। नवनियुक्त ११ जना मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतल निवासमा शपथ गराइन्। शुक्रबार शपथ लिने मन्त्रीहरुमा एमालेका प्रदीप ज्ञवाली,
सरकार विस्तारको तयारी काे काे बन्दैछन् मन्त्री ?
काठमाडाैं, २ चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार विस्तारको तयारी गरेका छन् । नेकपा एमाले, माओवादी र संघीय समाजवादी फोरमबाट सरकारमा थप मन्त्री पठाउने तयारी छ । मन्त्रिपरिषद विस्तारकै विषयमा प्रधानमन्त्री
न्यायपरिषद सचिव भन्छन्, कसैले कानुनै मान्दैन भने त म के गरुँ ?
काठमाडाैं, १ चैत । न्यायपरिषद सचिव नृपध्वज निरौलासँगको कुराकानीः प्रधानन्यायाधीशलाई पदमुक्त गरिएको पत्र किन पठाएको ? कानुनअनुसार प्रधानन्यायाधीशको पदावदी ६५ बर्षसम्म मात्रै हो । ६५ बर्ष पुगेपछि एक दिन पनि बढी पदमा बस्न मिल्दैन । त्यसअनुसार उहाँ गत साउन २१ गते नै ६५ बर्ष पुगिसक्नुभएकाले त्यसै दिनबाट प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पनि पाइसक्नुभएको रहेछ ।
सरकारलाई पूर्णता दिने तयारीमा अाेली
काठमाडाैं, १ चैत । राष्ट्रपति र सभामुख निर्वाचन सकिएलगत्तै सरकारलार्इ पूर्णता दिने तयारी थालिएकाे छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारलाई पूर्णता दिने गृहकार्यमा जुटेका हुन। दुई दिनयता प्रधानमन्त्रीले सरकारको सहयात्री दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल बढाएका छन् ।
काठमाडाैं, १ चैत । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममिति विवाद तन्किँदै जाँदा सर्वोच्च अदालतमा यसअघि कहिल्यै नदेखिएको भाँडभैलो मच्चिएको छ। न्यायपालिकाको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेका बेला वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीले बिहीबार मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी तोक्ने दाबी गरेका छन् ।
न्याय परिषदद्वारा प्रधानन्यायाधीश पराजुली पदमुक्त
काठमाडाैं, ३० फागुन । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमुक्त भएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सपथ खुवाउन शीतल निवास पुगेका पराजुलीलाई न्याय परिषद्ले पदमा नरहेको पत्र थमाएको हो। न्याय परिषद सचिवालयले काटेको पत्रमा पदमा नरहेको